Home Wararka Gabar iska soo tuurtay dabaq kamida dabaqyada ku yaala Magaalada Muqdisho
Sida ay sheegaan dad goobjoogayaal ah Gabar da’yar ayaa iska soo tuurtay dabaq kamida dabaqyada ku yaala Magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan degmada Waaberi. Warka ayaa intaas ku daraya in gabadhaan oo aan weli la helin magaceeda ayaa da’deeda lagu sheegay illaa 20 jir, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan sababta ay gabadhaan isku soo tuurtay.
Shacabka ku dhaqan degaankaas ayaa u sheegay warbaahinta in gabadhaan ay aheyd shaqaale ka shaqeeneysay guri dabaq ah oo ku yaalla degmada Waaberi. Gabadha oo uu soo gaaray dhaawac halis ah ayaa waxaa hadda lagu daweenayaa mid kamid ah isbitaalada Magaalada Muqdisho, waxaana xaaladeeda caafimaad lagu sheegay mid halis ah.
Dadka deeganka ayaa ku sheegay sababta ay gabadhaas isku soo tuurtay ayey inay tahay arrimo la xiriiro jaceyl ay u qabtay wiil ay saaxiibo ahaayeen, balse warkaas lama xaqiijin karo illaa gabadha laga wareysto. Sidoo kale, warar kale ayaa sheegaya inay gabadhaan isku soo tuurtay culeys ka heystay dhanka qoyskeeda inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin.